दुनियाकै अनौठो गाउँ, जहाँका सबै युवतीहरु कुमारी छन् ! - Chothale
गाउँ भन्दा बाहिरको कुनै पनि केटासँग त्यहाँका युवतीले बिहे गर्न चाहँदैनन् र बिहे गरिहालेमा पनि केटाले आफ्नो गाउँ छाडेर सोही गाउँमा भित्रिनुपर्दछ । यो मातृसत्तात्मक गाउँको रुपमा रहेको छ । गाउँमा विवाहित महिलाहरुले समेत आफ्ना लोग्नेलाई गाउँमा बस्न दिएका छैनन् । उनीहरुलाई हप्तामा ५ दिन कामका लागि गाउँ बाहिर पठाइन्छ र सप्ताहन्तमा मात्र घर फर्किन पाउँदछन् । १८ वर्ष कटेका छोराहरु पनि गाउँमा बस्न पाउँदैनन् । सन् १८५१ मा यो मातृसत्तात्मक गाउँको रुपमा स्थापना भएको हो ।
July 12, 2020 chothale 0
ओलीले गरे मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको अन्तिम तयारी, पूर्व–माओवादीका बुहारीमन्त्री र गृहमन्त्री बाहेकको पद जाँदै !
काठमाडौं । नेकपाभित्रको विवाद साम्य नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पनि तयारी गर्नुभएको छ...